Stewardess Uniforms Fabric wholesale high quality manufacturers and suppliers | I-Yun Ai
Ulapha: ekhaya - Imikhiqizo - Indwangu Yokuphatha Indwangu ikhwalithi ephezulu
Amayunifomu abashayeli bezindiza nabasebenzi bamakhabethe ayingxenye ebalulekile yesithombe sendiza yakho futhi ngaleyo ndlela ngokungaqondile anikela empumelelweni yakho. Kuma-sourse, kumayunifomu ukhiye yizindwangu zabo, njengalo, imibala egqame kakhulu, ukuthambeka okuthambile, unikeza abagibeli isithombe esihle nesasasa.
Amayunifomu abashayeli bezindiza nabasebenzi bekhabethe yizingxenye ezisebenza kakhulu ekusebenzeni komoya. Ziletha ubunikazi - ngaphakathi nangaphandle. Ngokuvamile noma yimuphi omunye uchwepheshe uhlobene kakhulu nokugqoka kwawo okujwayelekile njengabashayeli bezindiza. Ayikho enye inkambu, isitayela nokusebenza okungaphelelwa yisikhathi kuyadingeka ukufanelana kahle ngokufana nomfaniswano wabasebenzi bekhabethe.
Kungakho imfashini yezindiza ingaphezu nje kokugqoka noma ukuzihlobisa okumsulwa. Siqinisekisa ukuthi izinduku zakho zizizwa zizinhle ngokuphelele ezingutsheni zazo. Futhi abagibeli bakho bazokubona lokho, futhi.
Ukwakheka: 80% T 20% R
ukuzizwa ngesandla: ntofontofo
into no: YA17038
ukubalwa kwentambo: 24X32
Ukupakisha: Roll Ukupakisha
Inkampani yethu ikhethekile ekunikezeni izindwangu eziningi zezindiza, eziklanyelwe abasebenzi abahlukahlukene njengomphathi wendiza, abashayeli bezindiza, abasebenzi basemhlabathini, amalungu eqembu nabanye. Lezi zindwangu zenziwa zigcine engqondweni izinga lokunethezeka ukuze kugwenywe ukuphazamiseka ngezikhathi zomsebenzi omude.
Ngalolu hlobo lwezindwangu, sithatha kuphela ama-oda amasha, ngemuva kwethu qinisekisa yonke imininingwane, kuzobiza cishe izinsuku ezingama-45 ngesikhathi sokulungiswa kwendwangu. Ngakho-ke ngicela ubheke imininingwane ye-oda ngokushesha okukhulu uma i-oda lakho liphuthuma.
Singanikela ngenkonzo ephelele uma ufuna ukwenza ibhizinisi nathi, njengokuthola i-ejenti yezimpahla kanye ne-ejenti yokugunyaza amasiko ukungenisa izimpahla ezweni lakho, sinokuthekelisa kuma-coutries angaphezu kwama-40, kunolwazi ngempela ngathi ukuthi sikwenze. Ngaphandle kwalokho, kwi-cusomer yethu ejwayelekile, sivumele ukunweba isikhathi se-akhawunti izinsuku eziningana, kunjalo, kuphela kumakhasimende ethu avamile. Ngaphezu kwalokho, sinelebhu yethu engakuhlolela noma iyiphi indwangu, uma ufuna ukukopisha indwangu onayo, sicela usithumelele amasampula.